ग्रह/राशि अनुसार तपाईंको आजको दिन कस्तो हुनेछ ? हेर्नुहोस् आजको राशिफल
November 23, 2020 1098
मेष – नयाँ कार्यको थाल’नि गर्न राम्रो समय रहेको छ । साजेदारी कार्यमा बिशेष सजग रहनु होला । आफुभन्दा सानाको सहयो:गमा मनग्य लाभ प्राप्त हुनेछ । बो’लिको प्रभाव बढ्नाले ईष्ट मित्रको साथ मिल्नेछ । अध्यन अध्या’पनमा समय उत्तम रहेकोछ । कला&कौशलका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहने छ । आम्दानि उत्तम रहला ।
बृष राशि – सम्पादित कार्य&हरुका क्षेत्रमा सामान्य झन्झट आई पर्नेछ । मान्यजन तथा पारि’वारीक साथसहयोगमा केहि दुर’ताको सामना गर्नु पर्ला । भौतिक साधनको प्रयो’गमा बिशेष ध्यान दिनु राम्रो रहनेछ । बिद्या तथा बौधिक क्षेत्रमा भने राम्रो समय रहेको छ । सबारी साधनको प्रयोगमा बिशेष सा’बधानि अप&नाउनु पर्नेछ ।
मीथुन राशि – काम-काजको क्षेत्रमा भने बिशेष सजग रहनु होला अपजसआईपर्ने योग रहेको छ । नसोचेका क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुनाले मनमा खिन्नता पैदा हुनेछ । आटँ र शाह-समा बृद्धि भएता पनि साथि-भाई हरु टाडि-एको अनुभव हुन सक्ला । मान्य-जनहरुको साथ स-हयोगमा गरीएका कार्यहरु उत्तम रहनेछन । यात्रामा साब-धानि अपनाउनु होला ।
कर्कट राशि – बोलि-को गलत अर्थ लाग्न सक्ला तसर्थ वाणीमा ध्यान दिनुहोला । संचित रकम खर्च हुन सक्नेछ । खानपानमा बिशेष ध्यान दिनुहोला । सामान्य चोट पटक वा स्वास्थ सम्बन्धी समस्या-को सामना गनुपर्नछ । नजि-कका मित्र-जनहरुको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । अरुको बिश्वासमा नपर्नुनै उत्तम रहनेछ ।
सिंह राशि – ब्यापार ब्यवसायमा सा-मान्य समस्या देखा पर्न सक्नेछ । खुट्टा तान्ने ब्यक्ति हरुको बृद्धि हुनाले कार्यसम्पा-दनमा बिशेष होसियार हुनु पर्ने छ । निर्णय गर्ने क्षमतामा कमि आउने छ । खानपानमा रुचि जाग्नेछ । अधुरा-कार्य सम्पा-दनका निम्ती समय उत्तम रहनेछ । शारीरिक आलस्यताका कारण कार्यक्षेत्रमा अपज-सको सम्भा-बना रहनेछ ।
कन्या राशि – खुट्टा तान्ने ब्यक्तिहरु बाट बच्नु पर्ने समय रहेको छ । सामान्य कार्यको निम्ति धेरै समय र परी’श्रम खर्चनु पनेछ । मनमा सा’मान्य चिन्ता:ले बास गर्नेछ । परीवारका सदस्यहरु बाट टाढा भएको महसुस हुनेछ । तात्का’लिन आर्थीक अभाबको सामना गर्नुपर्नेछ । नजीकका ब्यत्तित्व’हरुबाट धोका हुनाले कार्य सम्पा-दनमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
तुला राशि – तपाईको कार्य कुश-लताले अरु ब्यक्ति+लाई मोहित बनाउन सक्छ । पठनपाठनको क्षेत्रमा समय मध्यम रहेको छ । आम्दा-निका स्रोतहरु फेला पर्नाले मनमा उत्साहा छाउनेछ । अरुको भर पर्नाले सामान्य झन्झ-ट ब्यर्होनु पर्ला । मान्यजन-हरुको साथ सहयोगमा अधुराकार्य हरु सम्पा-दित रहनेछन । कला कौश-लका क्षेत्रमा खर्चि-एको समय उत्तम रहनेछ ।
बृश्चिक राशि – सबारी साधनको प्रयो:गमा बिशेष ध्यान दिनु होला । सभा-सम्मेलनमा सहभागि हुन सक्ने योग रहेको छ । मान-सम्मान प्राप्तिको सम्भा’बना रहेको छ । ब्यापार ब्यवसा&यमा समय राम्रो रहेको छ । आम्दानि मध्यम रहला । सामा&जिक कार्यमा जुट्ने समय रहेकोछ । मान’सम्मान प्राप्तीको योग रहेकोछ । सवारि साध’नको प्रयोमा ध्यान पूर्याउनु होला ।
धनु राशि – आटँ शाहस’मा बृद्यि हुनाले तपा’ईका बिपक्क्षी’हरु कमजो’र रहनेछन । सामान्य यात्रा हुनसक्ला । मित्र तथा दाजु भाई बिचको सम्बन्धमा सुधार आउ’नेछ । श्रम र परीश्रमको राम्रो कदर हुने योग रहेको छ । मनोर’ञ्जन मुलक यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । माल सामान हराउन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । अपरीचित ब्यत्ति’हरुको बिश्वासमा नपरेकै बेश रहनेछ ।
मकर राशि -खानपानको क्षेत्रमा बिशेष ध्यान दिनु होला । आजको लगानि भोलिका निम्ति फा’ईदा जनक हुनेछ । स्वास्थ सम्बन्धी समा’स्याले सताउन सक्छ । अरुको भर पर्दा कार्यक्षेत्रमा सामान्य अप्जसआ’उनसक्छ । मान्य’जनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । सामान्य बाद-बिवादको झमे’लामा फसिने सम्भा’बना रहेकोछ ।
कुम्भ राशि – मानसिक चन्चलता’ले गर्दा कार्य दिगो नरहन सक्छ । पारीबारिक झोर झमेलाले सता’उन सक्छ । तपाईको कार्यको फाईदा अरुले सहजै लिन सक्नेछन । तपाईको सरल मिजासले मित्र’जनहरु आकर्शित हुने योग रहेको छ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । ब्यापार ब्यवसायका निम्ती उत्तम समय रहेकोछ ।
मिन राशि – अरुको बिश्वास गर्नाले धो’का हुन सक्छ । खुट्टा तान्ने ब्यक्ति’हरु बाट बच्नु पर्ने समय रहेको छ । सामान्य आर्थिक अ’भाब झेल्नु पर्ला । पारीबारिक झोर झ-मेलाले सताउन सक्छ । स्वास्थमा सामान्य सम’स्या आउन सक्छ । खानपानको गड-बढिका कारण सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । कार्य क्षेत्रमा अरुको दबाबको महसुस हुनेछ ।
Prevपशुपतिनाथको दर्शन गर्दै मंसिर ८ गते सोमबारको राशिफल हेर्नुहोस्
Nextड्युटी सकेर कोठा फर्किएका नेपाली श्रमिक पुर्नसिंहको राती सुतेकै अवस्थामा मृ’त्यु
७ वर्षीया बालि कालाई ज;बर्जस्ती कर’ णी गर्न खोज्दा बाटो हिँड्नेले देखेर युवकलाई पि ‘ट्दै प्रहरीमा बुझाए, भिडियो भयो भाईरल
१९ बर्षिय छोरालाइ सुतेकै ठाउमा मारि’दिए , आमाले डाको छोडेर रुँ’दै गरिन यस्तो.. (भिडियो सहित)
हेर्नुहोस् भिडियोमा पेट मिचीमिची हँसाउने ‘हल्का रमाइलो’ को ४० औं भाग
नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ: पढ्नुहोस् (61703)
वीर अस्पतालमा आँखा झिकि’एको भन्ने शवको भिडियो बाहिरियो, यस्तो रहेछ भिडियो..हेर्नुहोस्.. (50357)
आँचलले कसलाई हाल्ने भइन् मुद्दा? प्रमाण सहित उजुरी दिन प्रहरी कार्यालय पुगेपछि..(भिडियोसहित) (46266)
अचान’क छोरीको मोबाईल हेर्दा आमाबुबाको उ’ड्यो होस,यसबाट सबै जना सचे’त रहनुहोला (37934)
फेरि ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य , यस्तो छ आजको सुनको भाउ (31505)